ထိုသူပြောသမျှ…ကြားခဲ့ရတာတွေ..။။။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ထိုသူပြောသမျှ…ကြားခဲ့ရတာတွေ..။။။
Posted by “ဘီလူးကြီး”ogre on Sep 28, 2011 in Arts & Humanities |9comments
“ဟာ….အကိုကလဲ ဒီနေ့ မနက်ထဲက မိုးကလဲရွာ တာမွေ ဝေဇယန္တာ ဘက်မှာရေတွေကြီးလိုက်တာလဲမပြောပါနဲ့ …အော်ဒါလေး
ရလို့လိုက်သွားပါတယ် ရတာက သုံးထောင်ရယ် (၃)နာရီလောက်ကြာသွားတယ် ကားရေမြုပ်ပြီး စက်ထိုးရပ်သွားတာ တော်တော်
နဲ့ ပြန်နှိုးလို့မရ စိတ်ပျက်ဘို့ကောင်းတာပဲဗျာ”
““ ရေးကြီးတာက မိုးရွာတဲ့အချိန်လေးပါပဲဗျာ …လမ်းပျက်တာကတော့ တစ်မြို့လုံး နေရာအနှံပဲလေ..တစ်နေရာမှအကောင်းမရှိ
“ဟုတ်ပါ့ အကိုရယ်….ဒီလောက်ချိုင့်တွေကျင်းတွေသာများတာဗျာ ပျက်နေတာကိုမပြင်ပဲ ပလက်ဖောင်းတုံးတွေချည်ပဲ ပြင်လိုက်
ဆေးသုတ်လိုက် လိုက်လုပ်နေတာများ နေရာအနှံပဲ သူတို့ပလက်ဖောင်းများ လူမပြောနဲ့ ခွေးတောင်တက်မလျှောက်ဘူး”
“ဒါလဲ ဟုတ်တာပဲ ဗျ သူတို့ဟာကတစ်ကယ်ပျက်တဲ့ဟာမပြင်ပဲ ခဏထားလို့ ရတဲ့ဟာတွေလိုက်ပြင်ပြီး ဆေးသုတ်နေတာတော့ ဖင်သနပ်ခါးလူးသလို ဖြစ်နေပြီလေ”..။။။။။
“ဒါကြောင့် ပြောတာပေါ့ စကားမစပ် တစ်နေ့ ကျွန်တော့်ကားငှားစီးတဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေလားမသိပါဘူး ..သူတို့နှစ်ယောက်
““ ဘာဖြစ်ရမှာလဲအကိုရာ တစ်ယောက်ကပြောတာတော့ မင်းတို့ဌာနက မပြင်တော့ဘူးလားဆိုတော့ ..တစ်ယောက်ကပြင်ဘို့ အထက်ကိုတင်ထားတယ်တဲ့ ..ဒါပေမယ့် တစ်ကယ်ကုန်မှာက သိန်း(၇၅၀)ဆို ရင် ငါတိုက သိန်း(၁၀၀၀)လောက်ပိုတင်ထားရ
““ဒီလူပြောတာတော့ သိန်း(၁၀၀၀)တင်ရင် အထက်က ဘတ်ဂျက်ကျလို့ ချပေးရင် စာရွက်မှာ(၁၀၀၀)ပေမယ့် တစ်ကယ်ထုတ်ပေးတာ
(၈၀၀) ထဲတဲ့ (၂၀၀)က အထက်ကဖြတ်ယူထားလိုက်တာ သူကစာရွက်မှာ(၁၀၀၀)ရကြောင်း လက်မှတ်ထိုးရပေမယ် အမှန်က(ဂ၀၀)ပဲ
““ အဲဒီ(၈၀၀)ကို တိုင်းအဆင့်ဆိုလားသူ့ကို(၂၀၀)ပေးလိုက်ရတာတဲ့ မပေးရင်ပြဿနာရှာတာတဲ့..အဲဒီတော့ သူလက်ထဲမှာ(၆၀၀)ပဲ
ကျန်တော့ တစ်ကယ်ကုန်ကျမယ့် ဟာထက်တောင်လျှော့သွားပြီလေ…ဒါပေမယ့် သူကလဲ ရှေ့လူတွေ ယူသလို(၂၀၀)ထပ်ယူရမှာတဲ့
““လက်ကျန်ငွေနဲ့ မလောက်မယ်အတူတူ ပျက်တဲ့လမ်းကို အထက်ကလူကြီးလာမယ့်အချိန်လောက် ကျမှထပြင်ပြီး ပြင်နေပါပြီပေါ့
အပြသက်သက်လုပ်ရတာတဲ့ အဲဒီလာစစ်တဲ့လူကြီးအပြန်ကျရင် ခြင်းတွေ ပုလင်းတွေ ပေးလိုက်ရသေးတာတဲ့ဗျ …အဲဒါကြောင့်
သူ(၂၀၀)ယူထားမှတဲ့ မယူထားရင်အိတ်စိုက်ပဲဗျ လို့ပြောတာပဲ..””
““ကျုပ်တို့ မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်ဌာနဖြစ်ဖြစ် လာစစ်တဲ့လူကြီးအပြန် ကားနောက်ခန်းထဲ ခြင်းတွေပုလင်းတွေ ထည့်ပေးရတဲ့ ဓလေ့က
““ဟုတ်ပအကိုရာ..ကျွန်တော်ဆို ဘယ်ဌာနလူကြီးလဲမသိပါဘူး အိမ်သွားပြီး ဆီပုံးကြီးနှစ်ပုံးနဲ့ဆန်နှစ်အိတ် သွားပေးဘို့ ကားငှားလို့
““ဒါကျတော့ အိမ်နောက်ပေါက် က လူမသိသူမသိ ရတဲ့ ၀င်ငွေခေါ်မှာပေါ့နော်””
““ မီးပွိုင်များ မီးမပျက်ပဲကောင်းနေလို့ကတော့ ဘယ်နားပုန်းနေကြတယ်မသိပါဘူး မီးနီများမဖြတ်လိုက်နဲ လှစ်ကနဲထွက်လာလိုက်
““ကျွမ်းကျင်ရာ လိမ္မာ ဆိုသလိုနေမှာပေါ့ဗျာ..မီးပွိုင်ပျက်သွားရင်ရောဗျ..””
““အာ..အကိုကလဲ မီးပျက်သွားလဲပုန်းနေကြတာပဲဗျ မီးပျက်ပြီးလမ်းပိတ်လို့ လမ်းပြောင်းပြန်မောင်းရင်ထွက်လာပြီးဖမ်းပြန်ရော..””
““ နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် ဗျ ဟိုစတေကာကပ်တဲ့ကားတွေဆိုမဖမ်းဘူးဗျ …ကျွန်တော်တို့ တက္ကစီမောင်းတဲ့သူတွေ ဘတ်စ်ကား
မောင်းတဲ့သူတွေက စီးပွားရေးအတွက် ၀မ်းရေးအတွက် လုမောင်းပြိုင်မောင်းရတာ သူတို့ကျတော့ အကျမ်းပတမ်းလဲမောင်းသေး
““ဟာခင်ဗျားကလဲ အဲဒါက လူကြီးတွေစီးတဲ့ကားတွေမဟုတ်လားဗျ သူတို့က တာဝန်နဲ့ အချိန်မှီအစည်းဝေး တွေတက်နေရတော့
““ဟာ….အကိုကလဲ တစ်ကယ့် စတေကာကပ်ပြီး လူကြီးကားမောင်းတဲ့သူတွေက ၀န်ထမ်းတွေဗျ စည်းကမ်းရှိတယ်လေ သူတို့က
သူတို့ဖြစ်ရင် သူတို့ခံမှာသိတယ် ဒါကြောင့် ဒီလောက် စည်းကမ်းမပျက်ကြပါဘူး လူကြီးမပါမှသာ မောင်းချင်သလိုမောင်းတာ
ပိုဆိုးတာက လူကြီးသားသမီးတွေဗျ သူတို့ကားတွေလဲ စတေကာကပ်ထားကြတာလေ..””
““အာ..အကိုကသိတယ်ဆိုရုံသိတာ ခံလိုက်ရတဲ့ ကျွန်တော့အသိယာဉ်ထိမ်းရဲတွေဆို ခဏခဏ ပြောပြတာဗျ””
““ အဲဒီ ယာဉ်ထိမ်းရဲတွေက လူကြီးကားရော သူတို့သားသမီးကားရော ဖြတ်သွားရင် အလေးထပြုရတာဗျ တစ်ခါများဆို ကျွန်တော့်
အသိယာဉ်ထိမ်းရဲက အလေးထပြုတာ လူကြီး သားသမီးစီးတဲ့ကားဆိုပဲ သူအလေးပြုကာမှ စတေကာကပ်ထားတဲ့မှန်ချလိုက်တော့မှ
ကားထဲမှာ လျှာတန်းလန်း ထုတ်ပြီးထိုင်နေတဲ့ ခွေးကြီးပဲပါတယ်တဲ့ ..သူပြောတာတော့ ကားထဲဘယ်သူပါတယ်မသိဘူး ငါတို့ဘ၀ကတော့ ခွေးလဲ အလေးပြုနေရတာပဲတဲ့လေ..””
““အော်…အေးပေါ့မဲမဲမြင်ရင်အလေးပြုနေရတော့ ကားထဲဘာပါတယ်ဘယ်သိရှာမလဲ ဘယ်သူပါပါမပါပါ အလေးပြုလိုက်တာ ကတော့
““ဒါတင်ဘယ်ကမလဲ…အဲဒီလို သူတို့ကားကို (၁)နှစ်(၂)နှစ်လောက်စီးပြီးရင် စတေကာကပ်စီးချင်တဲ့သူဌေးတွေကို ဈေးကောင်း
ကောင်းနဲ့ပြန်ေ၇ာင်းတာဆိုပဲ လူကြီးကားဆိုပြီးအမည်ခံပေါ့ တိုက်မိရင်တော့ကိုယ်ဖာသာရှင်းလေ..””
““အခုမောင်းနေတဲ့ကားကလဲ ဖျက်သိမ်းထဲပါတယ်လေ အုံနာကတော့ဘာလုပ်အုံးမယ်မသိပါဘူး””
““ကားသစ်မလိုချင်ပါဘူးအကိုရာ..တော်ကြာအသစ်ပြန်သွင်းကာမှ ဂက်စ် ပြန်တပ်မပေးရင်ဒုက္ခ…ဒီဂက်စ်အားကိုးနဲ့ မောင်းနေရ
တာလေဗျာ ..ဆီဈေးနဲ့ဆို မကိုက်ဘူးလေ..မနဲပြူးပြဲရှာမှ အုံနာကြေးလေးရတာဗျ..အကိုတို့ တက္ကစီ စီးတဲလူတွေတော့ နောက်ပိုင်း
ဖျက်သိမ်းတက္ကစီ ဂက်စ်ကားတွေမရှိတော့ ရင်ဈေးတက်လာနိုင်တယ် တက္ကစီက အပြင်မှာနည်းသွားမှာလေ””
““အခုဖုန်းတွေလဲ (၃)သိန်းနဲ့ချပေးမယ်ဆိုပြီး နေ့ေ၇ွှ ညရွှေ့နဲ့ ဘယ်ချိန်မှ လာမယ်မသိဘူးလေး””
““ အာ ..ဒီဖုန်းရောင်းတဲ့လူတွေက တော်တော်တော့လယ်သားအကိုရ””
““အကိုကလဲ ပထမ ကျုပ်တို့တွေ မကိုင်ဘူးတဲ့ ဟန်းဖုန်းတွေ ထုတ်ရောင်းလိုက်တာ (၁၅)သိန်းလေဗျာ..ကျွန်တော်လဲမလေးရှား
ရောက်ဖူးတာပဲ ဒီလောက်မပေးရပါဘူးဟိုမှာပေါမှပေါ..ဒီမှာသာမတန်တဆကြီး ပိုက်ဆံရှိတဲ့လူတွေ ၀ယ်ကိုင်ကြတာပေါ့ ..
နောက်ပိုင်းရောင်းစရာကုန်တော့ တစ်ခါ ကမ်းရိုတန်းဆိုပြီး ထပ်ထုတ်ပြန်တယ် ဒီဟာကျတော့ ဘယ်လောက်လဲသာမသိတာ
အကုန်ရောင်းလိုက်ရတာပဲ..အခုလဲစီဒီအမ်အေဆိုပြီ ရောင်ပြန် ဂျီအက်စ်အမ်ဆိုပြီးရောင်းပြန်လုပ်နေတာများ (၅)သိန်းနဲလေ
ကျုပ်တိုတစ်တွေခံပေါ့ ဒါတောင်မြန်မာတွေမျက်စိပွင့်လာလို့ (၁၅)သိန်းနဲ့မရောင်းတာလားမသိဘူး သူများတိုင်းပြည်အဲလောက်
မှမရှိတာ လူတွေသိကုန်လို့နေမယ် အခုလဲ ..(၅)သိန်းတန်လိုင်းတွေ မကုန်သေးလို့ (၃)သိန်းဖုန် မချပေးသေးတာနေမယ်
အကိုမယုံရင်ကြည့် (၅)သိန်းတန်လိုင်းတွေအကုန်ရောင်းပြီးမှ (၃)သိန်းတန်ရောင်းမှာ..””
မှန်လိုက်လေခြင်း .. ပြောမဆုံးပေါင် တော သုံးတောင် ပဲဗျို့ ၊
“ဘီလူးကြီး”ogre ရေးလိုက်တာ မျက်စိထဲ ချက်ခြင်းမြင်ယောင်မိပါတယ်ဗျား ။
ကိုဘီလူးရဲ့ ပို့ စ်ထဲက
အင်ဂျင်နီယာ ၂ ယောက် စကားပြောသံ ကို ဖတ်ရတော့
ရုရှ က ပုံပြင်လေး ကို သတိရမိတယ် ဗျာ
ဘုရင်ကြီး နဲ့ အမတ်ကြီး
တိုင်းပြည်က ရတဲ့ အခွန်ငွေ တွေ လျော့ပါးလာတဲ့ အကြောင်း လက်တွေ့ ပြောပြတာကို ပါ ။
ထမင်းစားပွဲခုံ အရှည်ကြီး တစ်ခု မှာ
လူတွေ အများကြီး ပတ်ပတ်လည် ထိုင်နေကြတာ ကို
တစ်ဘက် ထိပ်ကနေ ဟိုဘက် တစ်ဘက်ထိပ်ဆီ ကို
ရေခဲတုံး တစ်တုံး လက်ဆင့် ကမ်း ခိုင်းလိုက်တာလေဗျာ
ပို့ ခံရမယ့် လူ လက်ထဲ လဲ ရောက်ရော
ရေခဲတုံး က ပိစိညှောက်တောက်လေးပဲ
ကျန်တော့တယ် ဆို သလို မျိုး ပဲ ဗျို့ 
ကိုဘီလူးရေ… ကျနော်သတိထားမိသလောက် တက်စီသမားတော်တော်များများက သတင်းစုံတယ်..၊ အမြင်ကျယ်၊ နိုင်ငံရေးအမြင်လည်းရှိတယ်…။ (ကျနော်က တက်စီငှားတိုင်း တက်စီသမားတွေနဲ့ လေကန်နေကျဆိုတော့ သိတယ်လေ…) ရွှေပြည်မှာက ဌာနတိုင်း၊ နေရာတိုင်းမှာ ခြစားနေတာပါ။
ဆိုမာလီနိုင်ငံပြီးရင် ဒုတိယနောက်ကလိုက်တာက မြန်မာပြည်ပါ။ ဒါပေမယ့် အထင်တော့ မသေးလိုက်ပါနဲ့…. ပထမယူထားတဲ့တစ်နေရာရှိပါသေးတယ်။။။ အရက်၊ ဘီယာကို ဈေးအပေါဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ ရွှေတံဆိပ်ယူ ထားပါတယ်…။ ဝေမျှပြီး ရေးပေးတဲ့အတွက် ရှဲရှဲပါ။
ကိုဘီလူးရေးတဲ့ ပိုစ့်ထဲကအကြောင်းတွေနဲ့တော့ တိုက်ရိုက်မပတ်သက်ပါဘူး
ဒါပေမယ့် ပြောချင်တာလေးရှိလို့ ပြောပါရစေ
ရုံးတစ်ရုံးမှာ ရုံးအုပ်ကြီးဟာ စိတ်တိုနေပါတယ်
ဒါနဲ့ပဲ စာရေးကြီးကို မဲပါတယ်
စာရေးကြီးလည်း တင်းသွားပြီး စာရေးလေးကို ဟောက်ပြန်ပါတယ်
စာရေးလေးကလည်း တဖန် သူ့အောက်က ပြာတာလေးကို ဆူပါတယ်
ပြာတာကလည်း ရုံးမှာသူ့အောက်ကလူမရှိတော့ ရုံးပေါက်ဝနား လာအိပ်နေတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်ကို
ဒါနဲ့ပဲ အဲဒီခွေးက ရုံးရှေ့က ဓါတ်တိုင်ကို သေးပန်းသွားပါရောတဲ့…….။။။။။
အခုတော့ အဲဒီခွေး မရှိတော့ဘူး။ အသားကင်ဆိုင် ရောက်သွားပြီ။
ကျုပ်ဖုန်းနဲ့ အသံဖမ်းပြီးပြန်ရေးတာပါ အသံဖမ်းထားမှန်းတော့သူမသိပါဘူး
အဆိုတော်ရဲလေးတို့ ရန်ဖြစ်တာအဖြစ်မှန် ဖြစ်ကြောင်းတောင်းပါသေးတယ်
ဟို ဘူတိုဇာမောင်းတဲ့ကောင်းလေးအကြောင်းလဲပါတယ် အလုပ်တွေသိပ်များနေလို့
ရေးပြီးသလောက်နဲ့ဖြတ်လိုက် ရတာပါ သူပြောတာတွေသာအကုန်ရေးရရင်
ဘီလူးကြီး အကြံလည်း မဆိုးဘူးပဲ ..ဖုန်းနဲ့ အသံဖမ်းတယ်ဆိုတာ …. ။ ကျွန်မက ဓါတ်ပုံပရိုက်ဖို့လောက်သာ အားသန်တာ အချင်းချင်းပြောတဲ့စကားကို မှတ်တမ်းတင်ထားရမယ်ဆိုတာ မေ့လျှော့နေမိတယ် …
ဖွချင်စိတ်က ထိန်းမရပုံများ .. ဟိုးတစ်နေ့က သစ်လုံးကားကြီးနဲ့ ကွန်တင်နာကြီး ညဘက် ကမ်းနားလမ်းပေါ် ပြိုင်မောင်းတာ ရှိသမျှ ကား လမ်းဘေး ထိုးဆင်းပေးရတယ်လေ … ။ အဲ့ဒါလေး ကားငှားစီးရင်းတွေ့တော့ ကားသမားကို အတင်းလိုက်မောင်းခိုင်းတာ ..သူကလည်း မောင်းပေးရှာတယ် … ညမှောင်နေတော့ ပုံကောင်းမရတဲ့ အပြင် .. ခေါင်းတောင် ပြတ်တော့မလို့ …
အစိုးရ ၀န်ထမ်းဆိုတာ အဆိုးတွေပဲ ပေးပြီး အဆိုးတွေပဲ ရစေတဲ့ အဆိုးရ ၀န်ထမ်းပါလား